विदेशबाट फर्किदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् भन्सार लाग्ने र नलाग्ने सामान – www.janabato.com
विदेशबाट फर्किदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् भन्सार लाग्ने र नलाग्ने सामान
२५ पुष २०७५, बुधबार ०४:५६ January 9, 2019 Janabato Online
५० ग्रामसम्म सुन ल्याउँदा एक ग्रामको ५२० रुपैयाँका हिसावले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार १० ग्रामको ५२ सय र ५० ग्रामको २६ हजार भन्सार लाग्छ ।
५० ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याएमा भने बढी ल्याइएको सुनमा प्रतिग्राम ६२० रुपैयाँ कर लाग्नेछ । यसअनुसार ५० ग्रामबाट बढेर १० ग्राम बढी सुन ल्याएमा थप ६२ सय र ५० ग्राम ल्याएमा थप ३१ हजार रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्छ ।
← नेपाल मगर संघ बुटवल उपमहानगर समितिको अध्यक्षमा थर्कबहादुर
हुम्लामा हिउँ →
सपना ओढेको त्यो रेसुङ्गा
४ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०४:१९ Janabato Online Comments Off on सपना ओढेको त्यो रेसुङ्गा
निर्मला पन्तको न्यायको पक्षमा बुटवलका स्रष्टाहरु सडकमा उत्रिए (फोटोसहित)
३१ भाद्र २०७५, आईतवार १५:१३ Janabato Online Comments Off on निर्मला पन्तको न्यायको पक्षमा बुटवलका स्रष्टाहरु सडकमा उत्रिए (फोटोसहित)
ट्रम्पको उत्तेजक आरोप विरुद्ध जुकरबर्गको शालीन उत्तर
१२ आश्विन २०७४, बिहीबार १५:११ Janabato Online Comments Off on ट्रम्पको उत्तेजक आरोप विरुद्ध जुकरबर्गको शालीन उत्तर